WINDOWS 10 (19H1) IMBONISO YAKHA I-18234 IKHUTSHIWE, NANTSI INTO ENTSHA! - ITHAMBILE
Windows 10 (19H1) imboniso Yakha i-18234 Ikhutshiwe, Nantsi into entsha!
UMicrosoft uye wakhupha into entsha Windows 10 jonga kuqala ukwakha i-18234 I-19H1 (rs_prerelease) kubasebenzisi abakwiringi yokuTyibela Phambili eyazisa inkxaso ye-inki kaMicrosoft, iNqaku eliNcamathekisayo 3.0, kunye nophuculo lwe-Snip & Sketch, kunye nolungiso lweebug ezininzi kwi-taskbar flyout, Ixesha, Microsoft Edge, Tshixa isikrini, iNotepad, iMicrosoft Store. usetyenziso, Useto, uMbalisi, iNethiwekhi iflyout ibambekile ekuchongeni, nokunye okuninzi.
Kunye nolu phuculo, ukulungiswa kweBug kuvuliwe 19H1 ukwakha 18234 UMicrosoft uthatha okwethutyana ngaphandle kweintanethi iinguqu ezininzi ebezikho ngaphambili kwabaNgaphakathi, ukukwazi ukuthiya ngokutsha iqela leethebhu kwiMicrosoft Edge, ukubonwa kwentsebenzo yebar yeGama, kunye nezithunzi zeXAML ezisanda kongezwa kulawulo oluvelayo uMicrosoft uthi ezi ziya kubuya kwinqwelomoya yexesha elizayo. .
Yintoni entsha Windows 10 (19H1) Yakha i-18234?
Ngokutsho kwenkampani, i-Sticky Notes 3.0 ngoku iyafumaneka Windows 10 abasebenzisi kwi-Skip Ahead Ring, iMicrosoft To-Do app ngoku ibandakanya inkxaso ye-Ink kunye ne-Snip & Sketch ngoku ineenketho zokulibazisa i-snip ukuya kuthi ga kwimizuzwana ye-10. Ukucofa iqhosha elitsha, uya kubona izinto ezintathu onokukhetha kuzo, kubandakanya Snip ngoku, Snip ngemizuzwana emi-3, kunye ne-Snip kwimizuzwana eli-10.
IMicrosoft To-Do ifumana inkxaso ye-inki
Ngomboniso wamva nje we-19H1 yakha iMicrosoft inkxaso eyongeziweyo yokubhala ngesandla ukuze ukwazi ukwenza lula imisebenzi kwiMicrosoft To-Do (uguqulelo 1.39.1808.31001 nangaphezulu). Uphawu lwe-inki lunokusetyenziswa ukubamba imisebenzi yakho ngokubhala kumphezulu woluhlu, iphawule ukuba igqitywe ngokubetha, kwaye ubeke uphawu kwisangqa esisecaleni kwabo ukuze ugqibezele. Nge-Inki ngoku unga:
Thatha imisebenzi yakho ngokwemvelo ngokubhala ngokuthe ngqo kumphezulu woluhlu.
Gqibezela imisebenzi yakho ngokubetha ngayo.
Sebenzisa amanqaku okukhangela ngaphakathi kwesangqa esisekhohlo somsebenzi ukuwugqiba.
Amanqaku ancangathi 3.0
Olu lwakhiwo lutsha lwazisa i-Sticky Notes 3.0, uhlaziyo olubhengezwe nguMicrosoft kwiveki ephelileyo kwaye oko kwenza ukuba kuthathelwe ingqalelo ukwenza kunye nokugcina amanqaku kanye kwidesktop yakho. I-Sticky Notes 3.0 iza nomxholo omnyama, ungqamaniso lwesixhobo esinqamlezayo, kunye nezinye izinto ezininzi.
I-Snip & Sketch iya ibangcono!
Windows 10 Yakha i-18234 yazisa i-tweaks entsha ye-Snip & Sketch, indawo yeMicrosoft yeSixhobo sokuHluka ngoku esidityaniswe kwizakhiwo ezizinzileyo ze Windows 10 ebandakanya ukulibaziseka komsebenzi. Kubekho impazamo kwindibano 18219 evalela ukusebenza kweqhosha elitsha, ngoko ke nceda uzame emva kohlaziyo! Cofa nje kwi-chevron ecaleni kweNtsha iqhosha kwisicelo, kwaye ngoku uya kufumana iinketho Thatha ngoku, Thatha imizuzwana emi-3 kwaye Thatha ngemizuzwana eyi-10. Ukuba isicelo sivuliwe okanye siqhoboshelwe kwi-Taskbar, unokucofa nje ekunene i-icon kwi-Taskbar ukuze ufumane olu seto, kuba inkampani yongeze kuluhlu lokukhangela.
Khuphela Windows 10 yakha i-18234
Windows 10 Imboniso yangaphambili Yakha i-18234 ifumaneka kuphela kuBangaphakathi kwiRingi yokuTyibela Phambili. Kwaye Izixhobo Ezihambelanayo eziqhagamshelwe kwiseva yeMicrosoft zikhuphela ngokuzenzekelayo kwaye ufake i-19H1 preview build 18234. Kodwa unokuhlala unyanzelisa uhlaziyo olusuka kwiiSetingi > Uhlaziyo & nokhuseleko > Hlaziya lweWindows kwaye ucofe iqhosha lokujonga uhlaziyo.
Qaphela: Windows 10 19H1 Yakha ifumaneka kuphela kubasebenzisi abazibandakanyayo/Inxalenye yeRingi yokuTyibela Phambili. Okanye ungajonga ukuba wenze njani joyina tsiba phambili iringi kwaye ujabulele iifestile 10 19H1 iimpawu.
Utshintsho ngokubanzi, uphuculo, kunye nezilungiso
Umxholo omnyama weFayile Explorer ukhankanyiwe Apha ifakiwe kolu lwakhiwo!
Siwulungisile umba apho ukuphuma kwiprofayile yakho yomsebenzisi okanye ukuvala iPC yakho kuya kubangela ukuba iPC ijongiwe (GSOD).
Enkosi, wonke umntu ngempendulo yakho malunga nezithunzi ze-XAML esizongezile mva nje. Sizikhupha ngaphandle kweintanethi okwangoku ngelixa sisebenzela ukulungisa ezinye zezinto owabelene ngazo nathi. Uya kuqaphela kwakhona ukuba i-acrylic isusiwe kwezinye izilawuli ezivelelayo. Baza kubuya kwinqwelomoya yexesha elizayo.
Silungise umba obangele ukuba ibar yomsebenzi iphaphazele (inethiwekhi, umthamo, njl.njl) ingasekho nemvelaphi ye-acrylic.
Silungise ingxaki ekhokelela ekuxhonyweni xa sisebenzisa i-WSL kwinqwelomoya yangaphambili.
Sihlaziye iPhaneli ye-Emoji ngoku ukuxhasa uphando kunye neengcebiso zesixhobo se-Emoji 11 emoji eyayikho yongezwe mva nje . La magama angundoqo aya kuvelisa uqikelelo lokubhaliweyo xa uchwetheza ngekhibhodi yokuchukumisa.
Silungise umba apho i-explorer.exe inokuthi ingqubene ukuba ubukwiMowudi yeThebhulethi kwaye ivule iJongo loMsebenzi ngelixa ikwimo yokubonisa.
Silungise umba apho ii-icon ze-app kwi-Task View zinokubonakala zimfiliba kancinci kwizixhobo eziphezulu zeDPI.
Silungise umba apho izixhobo ezimxinwa imisebenzi kuMda weXesha unokugqithe kancinane kwibar yokuskrola.
Silungise umba apho unokuthi ngokungalindelekanga ufumane impazamo usithi akukho app ixhaswayo ifakiweyo, emva kokucofa imisebenzi ethile kwiXesha, nangona usetyenziso oluxhaswayo lufakiwe.
Siwulungise umba apho imvelaphi ye-Taskbar inokucaca xa utshintsha isixhobo semizobo.
Silungise umba obangele ukuqhobosha ii-iyikhoni ze-app kwibar yomsebenzi kuthathe ixesha elide kunesiqhelo mva nje.
Silungise umba apho emva kokuseta iphini kwaye uyisuse, ukhetho lokuseta i-pin kwiscreen sokutshixa sinokubambeka njengendlela yokungena engagqibekanga, kunokuba isikrini sokungena sikhumbule indlela oyithandayo yokungena.
Senze uhlengahlengiso oluthile ukuphucula inani le-CPU esetyenziswa yi-cdpusersvc.
Silungise umba obangele iqhosha elitsha kwiSnip & Sketch lingasebenzi.
Silungise umba obangele uPhando lwe-Notepad kunye ne-Bing ikhangela i-10 10 endaweni ye-10 + 10 ukuba ibingumbuzo wokukhangela. Siphinde salungisa umba apho amagama anyuliweyo angaphela njengamanqaku ombuzo kwisiphumo sophendlo.
Silungise umba apho i-Ctrl + 0 ukuseta kwakhona inqanaba lokusondeza kwi-Notepad ayiyi kusebenza ukuba i-0 ichwethezwe kwiphedi yezitshixo.
Silungise umba wamva nje obangele ukwanda kwexesha elithathiweyo ukuvula iifayile ezinkulu kwi-Notepad xa ukusongwa kwamagama kwenziwa.
Enkosi kuye wonke umntu othe wabelana ngengxelo malunga nokubiza iithebhu ozibekele ecaleni kwiMicrosoft Edge. Sivavanya indlela eyiyo yolu phawu kwaye okwangoku, isusiwe.
Silungise umba apho ukukhuphela ifayile enkulu kwiMicrosoft Edge kuya kumisa kuphawu lwe-4gb.
Silungise umba apho ucofa iqhosha elingakumbi kwinkcazo ye-Microsoft Edge engaphakathi xa ufunda kwiinqwelomoya zamva nje kuya kuvula iphepha elingenanto.
Silungise umba apho izinto ezikwiiSetingi zeMicrosoft Edge kunye nemenyu engaphezulu ziya kuncitshiswa xa ukhetho lokunyusa ubungakanani bombhalo luvuliwe kwiiSetingi.
Silungise umba apho ukusebenzisa i-Fumana kwiphepha kwiMicrosoft Edge kungakhange kuqaqambise/kukhethe umzekelo wangoku wesiphumo.
Silungise umba apho emva kokuseta kwakhona iMicrosoft Edge egciniweyo iintandokazi ziya kubambelela zibonise inkwenkwezi ecaleni kwegama olithandayo endaweni yokuzalisa ifavicon yewebhusayithi (ukuba ikhona).
Silungise umba apho umbhalo ukhutshelwe kwiiwebhusayithi ezithile kwiMicrosoft Edge ungenakho ukuncamatheliswa kwezinye ii-apps ze-UWP.
Silungise umba onokuthi ubangele imixholo yeMicrosoft Edge yefestile isuswe kwisakhelo sefestile yayo.
Silungise umba obangele ukuba imenyu yokukhangela upelo ibonakale kwindawo engalunganga xa ucofa ekunene kwigama elingapelwanga kakuhle kwiMicrosoft Edge.
Silungise umba wokuba abantu bangaphakathi basebenzise Windows 10 kwiMowudi ye-S kutshanje okukhokelela ekuvuleni kweLizwi eliphuma kwi-Word Online uxwebhu alusebenzi.
Silungise umba ochaphazela Amaqela okukhokelela ekubeni wonke umbhalo ongathunyelwanga unyamalale emva kokugqitywa kokwakheka kwe-emoji (umzekelo ujikwa ube luncumo).
Silungise umba apho ukwabelana okukufutshane kuya kuvalwa kwisixhobo somthumeli emva kokurhoxisa isabelo kwizixhobo ezithathu ezahlukeneyo.
Silungise ingxaki ebangele ukuba icandelo lokwabelana elikufutshane le-UI yokwabelana lingabonakali kwabanye abasebenzisi nangona yenziwe yasebenza.
Silungise umba kwiinqwelomoya zakutsha nje apho amacandelo esaziso esinebha yenkqubela phambili (efana naleyo xa usebenzisa ulwabelwano olukufutshane) inokukhanya ngalo lonke ixesha ibha yenkqubela ihlaziywa.
Silungise umba osuka kulwakhiwo lwamva nje olukhokelela kwithagethi yokwabelana (eyaziwa ngokuba yi-app oyikhethayo xa ucelwa kwi-UI yoKwabelana) ayivala xa ucofa i-Alt+F4 okanye i-X.
Silungise ingxaki ebangele ukwehla kokuthembeka kweQalisa kwiinqwelomoya ezimbalwa ezidlulileyo.
Silungise imeko yogqatso olunefuthe kwiinqwelomoya zamva nje ezikhokelele ekubeni iCortana ingqubene xa isungula iingcebiso kwaye kukhangelwa kwiwebhu.
Silungise umba apho ukucofa-ekunene kwi-desktop kunye nokwandisa icandelwana eLitsha lemenu yomxholo kuthathe ixesha elide kunesiqhelo kutsha nje.
Siwulungise umba obangela ukuba iOfisi kuGcino lusilele ukusungula ngempazamo malunga ne-.dll engenziwanga ukuba isebenze kwiWindows kwiiPC ezisebenza kwiMowudi ye-S.
Silungise umba apho, xa kufakwa ifonti yomsebenzisi omnye (kunokuba uyifake njengomlawuli kubo bonke abasebenzisi), ukufakela kuya kusilela ngempazamo ebingalindelekanga isithi ifayile ibingeyofayile yefonti esebenzayo.
Silungise umba apho abasebenzisi basekuhlaleni abangengo-admin banokufumana impazamo besithi ukuhlaziya imibuzo yokhuseleko kwiakhawunti yabo kufuna iimvume zolawulo.
Silungise umba wamva nje apho umbala kunye neesetingi zewallpaper zingasetyenziswanga ngokuchanekileyo emva kokuphuculwa kwenkqubo xa imfuduko isenziwa kwimowudi engasebenziyo.
Silungise ingxaki ebangele ukuba ixesha elithathiweyo ukumisela iiSetingi linyuke ngokuphawulekayo kutsha nje.
Silungise umba apho ukuba iiSetingi zivulelwe iBluetooth kunye nezinye izixhobo kwaye emva koko zincitshiswe kwibar yomsebenzi xa uzama ukuphinda useto losetyenziso luya konakala.
Silungise umba osuka kulwakhiwo lwamva nje apho okokuqala ukhethe ngokuzenzela umhla kuMhla kunye nooLungiso lweXesha, izakubuyela kuJan 1st.
Sihlaziya umda wobungakanani bomfanekiso wembali yebhodi eqhotyoshwayo (WIN + V) ukusuka kwi-1MB ukuya kwi-4MB ukulungiselela ubungakanani obunokubakho besikrini esigcweleyo sesikrini esithathwe kwizixhobo eziphezulu zeDPI.
Silungise umba apho xa kusetyenziswa isiTshayina (Esenziwe lula) i-IME iza kuvuza inkumbulo kwiswitch egxilileyo, idibanisa ixesha elide.
Silungise umba obangele uqikelelo lombhalo kunye nokubhalwa kweemilo kungasebenzi xa uchwetheza ngesiRashiya usebenzisa ikhibhodi yokuchukumisa.
Silungise umcimbi wakutsha nje onokuthi ube nesiphumo soqhagamshelo lwenethiwekhi ethe kratya (kuquka uthungelwano olubambekayo oluchongayo, kunye nemeko yoqhagamshelo lwenethiwekhi edalayo). Qaphela, kukho izinto ezahlukeneyo ezinokuchaphazela amava akho onxibelelwano, ke ukuba uyaqhubeka namava obuthathaka emva kokuphuculwa kolu lwakhiwo, nceda ungene kwingxelo.
Enkosi kuye wonke umntu oye wazama kwaye wabelana ngengxelo malunga nokubonwa kwentsebenzo esiyongezile kwibar yomdlalo Yakha ngo-17692 . Sibakhupha ngaphandle kwe-intanethi, okwangoku, ukuphinda sivavanye eyona ndlela ibalaseleyo yokuya phambili kwaye sisebenzele ukukunika amava omdlalo omkhulu kwiPC yakho.
Silungise umba kuMbali ngoko xa sitshintsha ibhokisi yokukhangela kunye nomboniso webraille kunye noMbali, imeko ebonisiweyo ngoku ihlaziywe kwaye ulwazi lolawulo lugcinwe kwisiboniso.
Xa usebenzisa uKulula koFikelelo Yenza iSibhalo sibe sikhulu, unokubona imiba yokusika isicatshulwa, okanye ufumanise ukuba okubhaliweyo akunyuki ngobukhulu kuyo yonke indawo.
Xa usebenzisa imowudi yoMbali weSkena iShift + yokuKhetha imiyalelo kwi-Edge, isicatshulwa asikhethwa ngokufanelekileyo.
Umbalisi ngamanye amaxesha akafundi kwiSetingi app xa uzulazula usebenzisa iTab kunye nezitshixo zotolo. Zama ukutshintshela kwimowudi yokuJonga uMbali okwethutyana. Kwaye xa ucima imo yokuSkena kwakhona, uMbali ngoku uyakufunda xa uzulazula usebenzisa iTab kunye neqhosha letolo. Kungenjalo, ungaqala kwakhona uMbalisi ukuba asebenze malunga nalo mba.
Olu lwakhiwo lulungisa umba jikelele obangele amakhonkco asungule i-app enye esuka kolunye usetyenziso olungasebenziyo kwiinqwelomoya zokugqibela zabanye abaNgaphakathi, nangona kunjalo, kukho enye into eyahlukileyo yoku engeke isebenze kulwakhiwo lwanamhlanje: Ukucofa amakhonkco ewebhu kwi-PWAs ezinjalo. njengoko i-Twitter ingavuli isikhangeli. Sisebenza ukulungisa.
Unokuqaphela imvelaphi yezaziso kunye neZiko lokuSebenza lilahlekelwa ngumbala kwaye libe sobala (kunye ne-acrylic effect). Siyazi ukuba kwizaziso oku kunokubenza kube nzima ukufunda kwaye baxabise umonde wakho njengoko sisebenza ukulungisa.
[YONGEZIWE] Awunakukwazi ukwenza ubungakanani kwakhona boMphathi woMsebenzi wefestile kolu lwakhiwo.